Sikhetha ingubo yomshado ohlaza okwesibhakabhaka nesambatho esiluhlaza somkhwenyana: isithombe. Wedding in blue
Ubudlelwane Wedding Gqoka ukuze uthole umshado
Umshado awuwona wonke usuku ngakho-ke kubalulekile ukulungiselela kahle umkhosi. Ungashiyi izinsuku zokugcina ngaphambi kweholidi ukukhethwa kwesici esiyinhloko - ingubo yomshado kumakoti. Cabanga kusengaphambili mayelana nesithombe sakho, futhi ungene ezweni lomlingo! Siphakamisa ukuthi sisuke emibonweni evamile futhi unake ingubo yomshado yembala okwesibhakabhaka. Umakoti onembatho enjalo ngokuqinisekile uzodonsela ukunakwa.
Ukugqoka komshado obomvu: ukuvumelana kwezwe langaphakathi lomlobokazi
Ukugqoka okwesibhakabhaka kumlobokazi kufanekisela ukuthula, ukuvumelana nokuthembeka. Ngokuvamile izingubo zomshado zalomthunzi zikhethwa ngabantu abathandekayo, abathobekile nabangenalutho.
Laba bafazi besikhathi esizayo bangaziqhayisa, ngoba intombazane ekhetha umbala okwesibhakabhaka, izohlala ithembekile futhi ihlomise imindeni yomndeni. Abantu abanjalo bavame ukuba abangane nabantu abazolile futhi abanokuzethemba.
Abashadikazi bakhetha okwesibhakabhaka emcimbini womshado, banomuzwa wokuthi banesidingo sokuba nobuhlobo bokuthembela - ababekezeli ukukhashelwa nokuphikisana.
Makeup for the wedding in blue
Uma ukhetha umthunzi wengubo, udinga ukucabanga ngokuzenzela - akumele kube mhlophe futhi kungabangeli. Okokuqala futhi okuphambili, kufanele sigcizelele ubuhle bamehlo. Umbala omuhle wemithunzi kufanele uhlanganiswe nomthunzi womhlobiso. Ngeke kube khona ukungafani emathonjeni. Amehlo kufanele abhalwe nge-eyeliner emnyama noma emnyama. I-Blush ne-lipstick kufanele ikhethwe amathoni wokukhanya.
Ukukhetha isitayela somkhwenyana womakoti, ungasuka emibonweni evamile futhi unake ingubo emifushane. Hlela ngesitayela somhlobiso bese wenza okulungile!
Uma le ntombazane ikhetha umhlobiso womthunzi ohlaza okwesibhakabhaka emcimbini womshado oyingqayizivele, khona-ke izimbali kufanele zihambisane nokugqoka. Ungenza isixha samathebula emibala yomthunzi owodwa. Bheka irises, ama-cornflowers kanye ne-delphinium.
Ukuguqulwa komzimba ngaphansi kwesigqoko somshado obomvu
Umakoti kufanele aqaphele ngokukhethekile ukwelashwa kwemithi. Ngendwangu ende yomshado ohlaza okwesibhakabhaka omude, kungcono ukwenza umuthi ohlakaniphile. Inketho ekahle yomshado ingubo yaseFrance. Izibambo ezenziwe ngesandla ziheha ukunakekelwa kwezivakashi, ungakwazi ukuvuselela umuthi oqinile wesiFulentshi bese ufaka izinsimbi ezimbalwa. Esikhundleni se-varnish elula kungcono ukhethe i-pastel, futhi ugcwalise umngcele phakathi kwe-shades amabili nomama we-pearl. Into esemqoka lapho udala umuthi womshado akufanele ukwedlulele, ukuze marigolds abukeke engokwemvelo futhi agcwalise imihlobiso yomshado.
Ihlanganisa ngokucophelela i-manicure emnene emibala ye-pastel enengubo eluhlaza okwesibhakabhaka. Izinto ezilula kakhulu zinikeza umakoti isithombe somusa nokulungiswa. Uyazi ukuthi yini okufanele ucabange lapho ukhetha ingubo yomdanso?
I-blue suit yomkhwenyana
Ukugqoka komkhwenyana kufanele njalo kufane nokugqoka komakoti.
Ekukhetheni ijazi lomshado ohlaza okwesibhakabhaka ngaphandle kweseluleko esiwusizo, indoda ayikwazi ukuyenza:
Umkhwenyana we-suti eluhlaza okwesibhakabhaka uzobukeka emuhle, uma ukhetha usayizi ofanele wejacket yakho namabhantshi.
Indwangu kufanele ifihle amaphutha futhi igcizelele izinzuzo zesibalo samadoda.
Ukuntuleka kwamadoda amasha kufanele akhethe i-suit ehambisanayo nemigqa ecacile.
Amakhosikazi akufanele agqoke ijaji elibelethe kabili.
Amadoda angamahle angamahle angakhetha ijajethi enekhola yezintambo.
Umbala wesambatho wesilisa kufanele uxhomeke ekubukeni komkhwenyana nesikhathi sonyaka. Esikhathini se-shades emnyama ekushiseni kwehlobo kuzoshisa. Futhi ngenkathi ebandayo, ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka iyokwenza.
Izinsizwa ezinamabala aluhlaza okwesibhakabhaka zizohambisana nesithunzi samnyama omnyama, egcwele okwesibhakabhaka. Ama-Brunettes kufanele anake umthunzi ohlaza okwesibhakabhaka we-suit.
Uma umakoti ekhetha izingubo ezihlaza okwesibhakabhaka, i-suti yomkhwenyana kufanele ibe yinto efanayo.
Awukwazi ukwenza amaphutha ngokuhlanganiswa kwama-hues afudumele nabandayo abashadile.
Kumele usebenzise umthunzi omnyama ukukhetha izicathulo ezimnyama noma ezibomvu.
Ukulungiselela umshado, kubalulekile ukuthi ungaphuthelwa imininingwane. Izikhwama zomshado zomkhwenyana zikhetha ekupheleni kosuku - ukuze ukwazi ukugwema ukushaya ucingo ngosuku oluhle. Umbala wezicathulo kubalulekile njengomthunzi wengubo yomshado. Kodwa-ke, izicathulo zabesifazane zikhuni kakhulu ukukhetha, ngoba amantombazane afuna ukudansa futhi abe nesithende esiphezulu sokuzigabisa. Indlela yokukhetha izicathulo zomlobokazi, funda esihlokweni sethu esilandelayo.
Izigqoko zomshado nezitshalo zomkhwenyana wombala ohlaza okwesibhakabhaka njalo zibukeka zingavamile futhi zihlelekile. Futhi uma unqume ukuhlela umshado wombala wolwandle, zama ukucabangela zonke izidingo ezibalulekile zokukhetha izingubo.
Isimo esithakazelisayo: izingubo zabesifazane abakhulelwe emshadweni
Wedding dress for abesifazane abakhulelwe
Indwangu yomshado eqondile: ubukhulu obunqandekile
Ngukuphi ukugqoka okungeke kukhethwe ukufakaza komlobokazi?
Isikhathi senjabulo ethokomele: khetha ingubo yomshado we-beige
Ukunethezeka kwe-Ivory: ingubo yokugqoka yomshado
Ukuvutha komdlandla: ingubo yomshado obomvu
I-Tilapia ngaphansi kwe-bread crust
I-jelly elimnandi kusuka kuma-peaches
Strawberry smoothie nge tshocolate
Ukuthuthukiswa kwe-Fetal ngenyanga yesibili yokukhulelwa
Amadoda "amasenti amahlanu" emkhakheni wokuhlela umndeni
Amathiphu kwabangaphandle mayelana nokufundisa ingane yakho nokuthi ungayiphendula kanjani
Ukuphila komuntu siqu kaVera Alentova
I-meat steoked stewed
Izithombe ezithandekayo namakhadi ngo-September 1
"Eskimo" eyenziwe kusuka kubhanana nge tsholethi
Ukuvikela isikhumba samafutha kusuka elangeni